युवा पुस्ता केलाई अधिकार ठान्छन् ?
‘यो ह्युमन राइट्स हो आन्टी, तपाईँ आफ्नो काम गर्नुस् ।’
आजसम्म कानमा यो वाक्य गुन्जिइरहेको छ । एक बिहान नित्यकर्ममा तल्लीन भइरहेकी थिएँ । त्यसैबेला पेरिस टोल विकास संस्था इटहरीका अध्यक्ष घिसिङ दाइ हाम्रै घर अगाडि सौगात ! सौगात !! भन्दै मेरो छोराको नाम लिएर ठूलो स्वरमा बोलाइरहनुभएको थियो । के कुरो रहेछ भनेर हतारहतार अगाडि बरण्डामा आएर निध्याएँ ।
टोलमा बिहानैदेखि डेङ्गु सचेतना कार्यक्रम संचालन हँुदैरहेछ । त्यसैको लागि अध्यक्ष घिसिङ दाइ दुवै टोलका घरघरमा गएर मान्छे भेला पार्नु हुँदैरहेछ । डेङ्गु फैलने कारण र यसबाट बच्ने उपाय टोलबासी सबैलाई जानकारी होस् र डेङ्गु निर्मुल अभियानमा सफलता प्राप्त होस् भनेर उहाँ लाग्नुभएको रहेछ ।
म भने त्यो सचेतना कार्यक्रम दिउँसो नगरपालिकामा पो हुने होला भनेर ढुक्क परेकी थिएँ । अघिल्लो बेलुका प्राप्त भएको त्यस बारेको अपूर्ण खबरलाई फेरि दोहो¥याएर नसोधेकोमा आफैँलाई पछुतो लागिरह्यो । कार्यक्रम करिब सकिन लागेको जानकारी घिसिङ दाइबाट नै प्राप्त भयो । र पनि जे जति सुनिन्छ त्यो अवसर पनि किन छोडूँ भनेर म हतारहतार कार्यक्रमस्थलतिर गएँ ।
धरानमा हालसालै डेङ्गुको डरलाग्दो माहामारी फैलिएको थियो जसबाट १ हजार ८ सयभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका थिए । धरान अझै उडेङ्गुमुक्त भइसकेको छैन । असाध्य ज्वरो आउने तथा रगतमा प्लेटलेट्सको मात्रा स्वात्तै घटाई शरीर अत्यन्त कमजोर बनाउनुका साथै असह्य पीडा दिने महामारी डेङ्गु इटहरीमा पनि फैलिन थालिसकेको थियो ।
सचेतना कार्यक्रमपछि टोल निरीक्षणमा निस्कियो स्वस्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिको टोली । पछिपछि लागेँ म पनि । मलाई हाम्रो गाउँ शहर पनि विदेशका सुन्दर र सफा गाउँ र शहरजस्तै जहिले सफा र हरियाली होस् लाग्छ । रोग र भोकमुक्त होस् भन्ने लाग्छ । हरेक देशप्रेमी सचेत नागरिकलाई लाग्ने यही हो ।
जाबो फोहोर तह लगाउन त हामी सक्षम छैनौँ, जानाजान फोहोर गर्नेलाई तह लगाउने संविधानमै उल्लेख गरिएको नीति नियम त लागू गर्न सरकार सक्दैन । कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन भने विकास र निर्माणका कुरा के फलाक्नु जस्तो लाग्छ । माकुराको जालो जत्तिकै बाक्लो अनि दुई वर्षमै भत्किएर विरुप हुने कालोपत्रे सडक र हावा नै नछिर्ने कङ्क्रिटको शहर बसाएर मात्र विकास हँुदैन ।
मानिसमा स्वच्छ मानसिकताले भरिएको चेतनाको विकासले गाउँ, टोल र शहर हुँदै देश विकास हुन्छ ।
तर हाम्रो मुलुकमा अगुवा, नेता, कार्यकर्ता र सत्तासीनहरूमा पनि यस्तो चेतना गुम छ । जसमा चेतना छ ऊ पनि बुझ पचाएर हिलाम्य र धुलाम्य शहरलाई कालो सिसा भित्रबाट हेरेर सफा छ भन्छ अनि कसरी हुन्छ देश सफा सुन्दर र समृद्ध ? टोल शहरमा कतै फोहोर देख्यो भने पहिले त्यस फोहोरले मेरो आँखामा आएर ठुङ्छ अनि मेरो छातीमा घोच्छ तैपनि भन्दा लाग्ने ठाउँमा गएर सम्झाउँछु । नलाग्ने ठाउँमा निरीह भएर केवल टुलुटुलु हेर्नु शिवाय बिकल्प हुँदैन अनि गहुँ्रगो छाती लिएर आफ्नो बाटो लाग्छु ।
आफ्नो आँगन बढारेर अर्काको करेसामा फोहोर थुपार्ने, आफू र आफ्नो सङ्घारभित्र मात्र सुग्घर भए पुग्छ भनेर सोच्ने, फोहोर गर्नु खराब हो भन्ने बुझेर पनि बुझ पचाउने, वातावरण र पर्यावरणप्रति बेपर्वाह मानिसहरूको मानसिकता र स्थानीय सरकारको निरीहपन देखेर टीठ लागेर आउँछ ।
विदेशको यात्रामा जाँदा आफूले खाएको चकलेटको खाली खोल वा कागजका टुक्रा गोजीमा बोकेर हिँड्ने मानिस यहाँ आएर बाटोमा होस् या सार्वजनिक स्थानमा अरुका आँखा छलेर जतासुकै फोहोर फाल्ने र बाटोको छेउछाउमा र सडक पेटीतिर सुटुक्क फोहोर भरिएको प्लास्टिकको झोला राख्ने सज्जन र बुद्धिजीविहरूको आदत, सोच र मानसिकता देखेर दया लागेर आउँछ । धिक्कार लाग्छ त्यस्ता नागरिकहरू देखी । आन्तरिक होस् या बाह्य पर्यटकले कुनै पनि ठाउँलाई हेर्ने र देख्ने पहिलो पक्ष भनेको त्यहाँको सरसफाइ नै हो ।
पर्यटक वा नवआगन्तुक जोसुकै होस् फोहोर शहरमा पाइला राख्दा वर्षाैंदेखि मुख नधोएको, ननुहाएको दुर्गन्धित मान्छेलाई भेटेजस्तो हँुदो हो ।
मानिस जति नै गुणी, शिक्षित बुद्धिमानी होस् उसको गुणलाई त्यो फोहोरीपनले खप्लक्कै निलिदिएको हुन्छ । ऊसँग मान्छे नजिक हुन चाहँदैनन् । त्यस्तै गाउँ, शहर पनि जहाँ सफासुग्घर छ त्यहाँ मानिस बारम्बार आउन चाहन्छन् । शहर वा गाउँ जतिसुकै सुन्दर, महङ्गो, राम्रो, भव्य आलीशान भए पनि त्यहाँ सरसफाइका साथै राम्रो आतिथ्य भएन भने त्यसको केही अर्थ रहँदैन ।
कुनै पनि फोहोर र दुर्गन्धित गाउँ वा शहरको नाम लिँदा पनि मान्छेको आङ जर्किन्छ । जानैपर्ने बाध्यताले मात्र ऊ त्यो फोहोर ठाउँमा जान्छ । रहर र इच्छाले जाँदैन ।
त्यहाँका बासिन्दा तथा समुदायलाई फोहोरमैलाले गर्ने खराबी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । जैविक फोहोर मात्र होइन मानिसका लागि मानसिक फोहोर झन खतरनाक हुन्छ । त्यसले मानव सभ्यतालाई नै अस्वस्थ बनाउँछ । चाहे त्यो युवा जमातमा होस् या वयस्क, प्रौढ र वृद्ध जमातमा होस् । बढ्दो शहरीकरण र पश्चिमीकरणले युवा जमातको दिमागमा यस्ता मानसिक फोहोरहरू जम्मा पार्दै गरेको पाइन्छ । आफ्नो जिम्मेवारीबाट भने १२ हात पर बस्ने तर गलत चीजको सेवन गर्न पाउनु, मनलागी खराब बाटोमा हिँड्नु पाउनुलाई आफ्नो मानव अधिकार ठान्नेहरूको जमातले पनि शहरमा एक प्रकारको प्रदुषण बढाइरहेको छ ।
जनप्रतिनिधि र स्वस्थ्यकर्मीसहितको टोलीलाई हाम्रो टोल पनि निरीक्षण गरिदिनको लागि अनुरोध गरेँ । विशेष त डेङ्गुको प्रभाव निर्मुल गर्न कस्ता कस्ता होशियारी अपनाउनुपर्छ ? कस्तो ठाउँको सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर जनप्रतिनिधि र प्राविधिकहरूको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी सल्लाह र सुक्षाव दिए थप कुराहरू टोलबासीलाई सम्झाउन सजिलो हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई तानेरै हाम्रो टोलतिर ल्याएँ । समय यस्तै बिहानको साढे ८ बजेको थियो
टोलीले टोलको निरीक्षण गर्दै आयो । निरीक्षणको क्रममा टोलमै भएको एउटा रेस्टुरेन्टको चेपबाट बग्ने पानीमा टोलीमा आउने स्वस्थ्य प्राविधिकको आँखा प¥यो । त्यस रेस्टुरेन्टको भित्रदेखि निरीक्षण गर्न आवश्यक देखेर त्यसको साइडको गल्लीबाट भित्र छि¥यौँ ।
ओहो भित्र त हेरिनसक्नु ! जताततै बियरका, पानीका, रक्सीका रित्ता बोतल, फुटेका सिसा, पानी जम्ने खाल्डो अनि फोहोरको दलदल । वर्षाैंदेखि नटिपिएकोजस्तो लाग्ने सिगरेट, चाउचाउ, खैनीका खोस्टा, मैलो पर्दा झुण्ड्याइएको क्याबिनको सङ्घारतिर यत्रतत्र छरिएका सिगरेटका ठुटा, मक्किसकेका पुरानो सामानको अस्तव्यस्त रास, छेवैमा अरु यस्तैयस्तै केके हो भ िसाध्य छैन ।
भित्रपट्टी त्यस्तो फोहोर देखेर वडाध्यक्ष दीपक गौतम, जनप्रतिनिधि दिदी भद्रामगरसहित स्वास्थ्य परामर्शदातासहितको टोलीले रेस्टुरेन्टको सञ्चालकलाई सम्झाउने भयौँ । वडाध्यक्षले होटल सञ्चालकलाई सचेत गराउँदै भने, ‘हामी फेरि निरीक्षणमा आउँछौं त्यतिबेलासम्म जम्मै सफा गरिसक्नु ।’
बाहिर खासै भीड नदेखिने होटलमा भित्र भने कलेज युनिफर्म लगाएका तथा नलगाएका युवा युवतीहरूको ओहोरदोहोर चलिरहेको थियो । कुनाकाप्चामा सरसफाई हेर्ने क्रममा भद्रा दिदीले क्याबिनको पर्दा उचालेर भित्रतिर पनि हेर्नुहँदै थियो ।
अचानक दिदीको अलिक आश्चर्यजनक बोली सुनियो । ‘के हो यो तिमीहरूको यस्तो हँ ?’ के भएछ भनी हेर्न हामी पनि उतैतिर झुम्मियौं । क्याबिनभित्र १५÷१६ वर्षका जस्ता देखिने कलेज युनिफर्म लगाएका २ जना केटी र २ जना केटा मस्तले जलिरहेको सिगरेट कोही हातमा समाएर त कोही सिगरेट तान्दै बसिरहेका थिए । छेउमा देशी मदिराको खाली सिसी र रित्तो ग्लास पनि थियो । हामी सबै क्याबिनको ढोकामा उभिएर हेरेपछि उनीहरूले सल्केको सिगरेट एस्ट्रेमा फ्याँक्न पनि सकिरहेका थिएनन् न त पिउन नै सकिरहेका थिए ।
तिनीहरूको अनुहार लाजले हो कि डरले हो रातो र अनौठो भावमिश्रित भएको देखिन्थ्यो । म भने आफ्ना छोराछोरीको सुन्दर भविष्यको लागि जिन्दगीभरको कमाइ लगानी गरेर स्कुल कलेज पठाउने अभिभावक सम्झेर भावशून्य भइरहेकी थिएँ । मलाई केही बोल्न आएन । अभिभावक सम्झिरहेँ । उनीहरू नै मथिङ्गलमा नाचिरहे जो आफ्ना छोराछोरी कलेज स्कुल गएका छन् भनी ढुक्क भएर उनीहरूको हरेक फर्माइस पूरा गर्न रातदिन मिहिनेत गरिरहेका छन् । खाना तातो पार्दै छोराछोरी पर्खिरहेका छन् । छोराछोरी भने कुलत र कुसङ्गतको दलदलमा हेलिइरहेका छन् ।
‘तिमीहरूलाई बुवाआमाले कलेज, स्कुल पठा’को यसैका लागि हो ? तिमीहरूको पढ्ने ठाउँ यही हो ? तिमीहरूको कलेज स्कुलमा यही सिकाउँछ सर म्यामले,’ भन्दै भद्रा दिदी तिनीहरूलाई आक्रोशमिश्रित अनेक प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो । यति हल्लीखल्ली हुन थालेपछि अरु क्याबिनबाट पनि केटाकेटी निस्केर सरासर बाहिरतिर लागे । जल्दै गरेको सिगरेट हातमा लिएर दुई जना केटाहरू भने भद्रा दिदी सँगसँगै आक्रोशित मुद्रामा बोल्दै थिए । केके बोले सबै निध्याउन सकिनँ । यति धेरै वाक्यहरू मध्ये एउटा झ्याप्ले केटाले बोलेको एउटा वाक्य चाहिँ प्रष्ट सुनेँ ।
‘यो ह्युमन राइट्सको कुरा हो आण्टी तपाईँ आफ्नो काम गर्नुस् ।’ भद्रा दिदी त्यो वाक्यको प्रतिवाद गर्दै हुनुहुन्थ्यो । टोलीका अरुले पनि एक÷दुई कुरा बोले । निकै बेर विवाद चल्यो । क्याबिनभित्र बसेका चारजना केटाकेटी घोसे मुन्टो लगाएर सरासर निस्केर बाहिरतिर लागे । तिनीहरू इटहरीकै राम्रो चलेको एउटा कलेजका विद्यार्थी थिए ।
हामी पनि बाहिर निस्केर होटलको आँगनमा उभियौं । होटल सञ्चालकसँग छलफल ग¥यौँ । यसरी कक्षा बङ्क गरेर आउने विद्यालय कलेजका विद्यार्थीलाई होटलमा आएर क्याबिनमा बसेर चुरोटखैनी खान, मदिरा पिउन, मनपरी गर्न नदिन सल्लाह दियौं ।
विवाद चलिरहेकै थियो । भद्रा दिदी भने मलाई बारम्बार किन तिमीहरूले यस्ता विषयमा निगरानी नराखेको ? टोलमा यस्ता समाज अस्वस्थ बनाउने व्यवसाय चलाउन किन अनुमति दे’को ? तिमीहरू के हेर्छाै ? भनेर प्रश्न प्रतिप्रश्न गर्दै हुनुहुनन्थ्यो । म नाजवाफ थिएँ । साँच्ची भन्नुपर्दा मैले आफ्नै टोलको त्यो होटलमा कस्ता किसिमका ग्राहकहरू आउँछन् ? त्यहाँभित्रको संरचना कस्तो छ भन्ने कहिले पनि याद गरेकी रहेनछु ।
त्यहाँ निकैबेर चलेको विवादपछि ह्युमन राइट्सको कुरा गर्ने केटा भने कलिला अन्य चार केटासहित होटलको अगाडिको भागमा बस्यो । हाम्रो सामुन्ने नयाँ चार खिल्ली चुरोट लियो र उसका साथी सबैलाई बाँड्यो । सबैले पालैपालो सल्काए अनि आग्नेय नेत्रले हामीलाई प्रहार गरी ठाडो घाँटी लाउँदै धुवाँको मुस्लो उडाउँदै मस्तले तान्न थाले ।
खान्छौं हामी, के गर्छाै तिमीहरूले भनेजस्तो शैलीमा । मेरो मस्तिस्क भने घाँसको भारी बिसाई हतारहतार भातको गाँस टिपेर स्कुल कुदेको, हाम्रो जमानाको विद्यार्थी जीवन सम्झिँदै त्यो ठिटोले उठाएको ह्युमन राइट्सको अर्थ लगाउदै थिएँ ।
आजको युगमा कस्ता कुरालाई युवाहरू आफ्नो अधिकार सम्झन्छन् ? यो सम्झेर सोचेर अचम्म लाग्छ । हुन त आजकालका छोराछोरीहरूबाट केही ठूलो अपेक्षा लिनु आफैँबाट आहत हुनु हो । तर कुनै पनि अभिभावकले सन्तानलाई जोडेर कुनै सपना देख्नु स्वभाविक कुरा हो ।
सबैले केही न केही सपना देखेकै हुन्छ केही न सुन्दर कल्पना गरेकै हुन्छ । तर अहिलेको सन्तान अभिभावकको सपनालाई बिपनामा बदल्न कत्तिको प्रयासरत छन् ? हरेक घरमा उनीहरूले देखाउने व्यवहार र उनीहरूले सम्झिने आफ्नो अधिकारले अधिकांश अभिभावकहरूलाई जिउँदै मर्माहत पारेका घटना प्रशस्त छन् ।
अभिभावकहरूसँग कुनै किसिमको संवाद गर्न नरुचाउनु, घरायसी काममा कुनै सहयोग नगर्नु, बन्द कोठाभित्र रातभर इन्टरनेटमा हराउनु, बिहान अबेरसम्म सुत्नु, आफन्त नातागोता घरमा आउँदा अभिवादन गर्न पनि २ मनको भारी बोक्नुजस्तो ठान्नु, आफ्नो मौलिक संस्कारलाई वाहियात ठान्नु, अभिभावकसँगै बसेर आफ्नो चाडपर्व मनाउनु भन्दा डान्सबार क्लबहरूमा रमाउनु आनन्द मान्ने पुस्ता छ ।
केही काम पर्दा आफन्तकोमा जान झ्याउ मान्नु, आफ्नै दामलका साथीहरूसँग मात्र उठबस गर्न रुचि राख्नु अहिले अधिकांश छोराछोरीमा पाइने विशेषता हो । आजको युगमा युवाहरूमा समयसँगै बढ्दै गएको यस्तो पश्चिमीकरण भनौं कि शहरीकरणले युवाहरूको भविष्य कतातिर डोहो¥याउँदै छ गम्भीर भएर सोच्ने समय आएको छ ।
हाम्रो समयमा हामी घरको धेरै जिम्मेवारी बोक्नुको सँगसँगै पढ्न स्कुल कलेज मात्र जान पाउँदा पनि अभिभावकप्रति धेरै नै अनुग्रहित हुन्थ्यौं । अहिलेका छोराछोरी भने स्कुल कलेज गएर पढिदिएर अभिभावकलाई धेरै नै गुन लगाएको जस्तो शैलीमा पढिदिएकै त छ नि जस्तो गर्छन् । धेरैजसो युवाहरूको विचारमा जन्म दिएपछि बाब्ुआमाले उनीहरूको हरेक फर्माइस पूरा गरिदिनुपर्ने अभिभावकको अधिकार ठान्छन् । घरायसी कुनै तनावबिना बाँच्न पाउनु आफ्नो अधिकार हो भन्ने ठान्दछन् ।
छोराछोरीको पौरखको त कुरै नगरौं बरु अभिभावक उनीहरूको लागि बैंक बनिदिन सके उनीहरूको प्रसन्न मुहारको दर्शन पाउन सकिन्छ । त्यति देख्न पाउनु पनि धेरै अभिभावकले भाग्य नै सम्झिनुपर्ने अवस्था छ । अभिभावकको मजबुरी र घरायसी समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गरी स्वतन्त्र रूपले डुल्नु, घुम्नु, मन लागेको खानु, मन परेको ठाउँमा जानु, मन लागुञ्जेल सुत्नु, मन परेको साथीहरूसँग मात्र झुम्मिरहनु, आफन्त तथा इष्टमित्रहरूको मतलब नगर्नु उनीहरू आफ्नो नैसर्गिक अधिकार ठान्छन् ।
विशेष गरी शहरी क्षेत्रका युवा पुस्तामा यो भ्रम छ । यसको दोषी उनीहरू मात्र नभई हामी अभिभावक स्वयम् पनि छाँै कि ? गम्भीरतापूर्वक सोच्ने समय आएको छ । विशेष गरी युवा पुस्तामा देखिने यस्तो भ्रमले उनीहरूलाई अन्धकार भविष्य बनाउने कुलततिर पो ठेल्दै छ कि ? होशियार हुनु आवश्यक छ ।
छोराछोरी स्कुल कलेज गएका छन् भनेर ढुक्क भएर बस्ने समय छैन । आजका शहरी युवाहरूमा छ्यास्छ्यास्ती देखिएको यस्तो परिपाटीलाई पाश्चात्य आधुनिकताले भित्र्याएको संस्कार ठान्ने कि युवा पुस्ताको नैसर्गिक अधिकार मान्ने अहिलेको अभिभावक वर्ग अलमलमा छ ।
यस्तो सोचको भ्रमले आमाबाबु र छोराछोरीबीचको भावनात्मक संवेदना र राष्ट्रको गहना तथा सांस्कृतिक वैभवहरू विलीन हुँदै जाने प्रबल खतरा देखिन्छ ।